Chinese chikafu mushonga - Shijiazhuang Yiling Hospital
Chinese zvokudya kurapa (anonziwo muviri kurapa uye Mishonga kurapa) iri kwadzinoita kudhayeta midzi Chinese dzidziso pamusoro zvinokonzerwa zvokudya yevanhu Muviri, uye ichifunga pfungwa dzakadai kudya zvine mwero. Mirairo Its huru vari kongiri kuti pevairwara maonero uye pfungwa inodzidzwa zvetsika Chinese mushonga.
Food kurapa vagara vanowanzochema yokusvika utano pakati pavanhu.
Diet sezvo chinonyanya kukosha muupenyu, kuva pamwero mukuru, kunokanganisa utano hwedu. Nokuti vanhu vanotambura nezvirwere, zvinodyiwa kukosha. Varwere vedu, zuva zvokudya zvavo zvinovavarira kuwedzera panyama kupora, apo nokugadzirisa muviri, kuti muviri anogona kudzorerwa pazera utano ezvinhu nekukurumidza, kuti vabudirire nani kurapwa maturo.
Chinese chikafu jekiseni rine nomugumisiro mukuru pakurapa kenza, scleroderma, tsandanyama atrophy, rheumatism, gwenya dzouropi chirwere, fibromyalgia, chirwere cheshuga, nephropathy, uye dzimwe mhando chisingaperi zvirwere uye Muzviitiko zvakaipisisa.
Bvunza nyanzvi nokuti mibvunzo yakananga.